20% Win mbo mbuli Daily Cleo Plus isiokwu ruo £ 200 |
20% Win mbo mbuli Daily Cleo Plus isiokwu ruo £ 200
usoro & ỌNỌDỤ
Nke a bonus ga-abụ n'etiti 5th – 11nke January 2017 GMT.
Naanị Uru na Loss (P&L) on oghere egwuregwu n'etiti 00:00 & 23:59 (GMT) n'ụbọchị nke nkwalite ga ịgụ kwupụta nzere maka agbam ume.
The agbam ume ga-ọdịda dị ka net uru (ezigbo ego winnings) on ohere mpere.
Ke edinam na gị net P&L ka nweworo a nke kacha nta nke £ 10 na winnings, ị ga-enweta a agbam ume gbakọọ na 20% gị oké njọ P&L.
Iji ruo eruo maka Win agbam ume, Player doro a kacha nta nkwụnye ego nke £ 10 na n'ụbọchị nke nkwalite.
Oke ngụkọta mmeri agbam ume ego bụ £ 200 na daashi ego.
Standard bonus wagering chọrọ nke 30x daashi ego itinye tupu bonuses ma ọ bụ ihe ọ bụla kwekọrọ ekwekọ winnings nwere ike napụrụ.
Oke kacha akakabarede ego si ego ego a ga-capped na 4X daashi ego ọdịda.
Daashi ego tọghata akpaghị aka otu ugboro wagering zuru ezu.
Wagers on Blackjack na ruleti adịghị eme ka Mbelata nke wagering chọrọ bonus ọtùtù.
Player na-eti na naanị otu bonus nwere ike nọ n'ọrụ n'otu mgbe, biko gaa na “akaụntụ M” ngalaba na-ele gị dum bonus kwụ n'ahịrị
General Usoro na ọnọdụ ide.
Usoro na Condtion-edebe ma na- 25 spins
Usoro na Ọnọdụ – 50% Win Boost New game…
Usoro na Ọnọdụ – Tuesday Match – 50%…